ezaposwa ngomhla 06 / 28 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Desogestrel. Ibe 0 Comment.
3. Indlela Of Action—Powder
Thatha i-DesogestrelUbunzima ngexesha elinye ngosuku. Iipilisi zokulawula ukuzalwa zisebenza kakuhle xa kungekho iiyure ezingama-24 ezidlula phakathi kwamaxabiso.
♦ Iveki iqale: Qhubeka uthatha ipilisi enye ngosuku ukuya kwiCawa, uze uphonsa yonke ipakethe uze uqale ipakethi entsha ngaloo mini. Sebenzisa ifom ye sibini yokulawula ukuzalwa (umzekelo, ikhondom, i-spermicide) kwiintsuku ze-7 emva kokuba ulahlekelwe umthamo, ukukhusela ukukhulelwa. Ukuba ulahlekelwa ixesha lokuya esikhathini kwiinyanga ze-2 ngokulandelelana, jonga ugqirha wakho kuba unokukhulelwa.
6. Ngubani ongasebenzisa iDesogestrelpowder?
♦ Ukuba unempilweni kwaye akukho zizathu zonyango ukuba kutheni ungafanele uthathe i-deogestrel powder, ungayithatha de ibe yinto yokutshatyalaliswa kwexesha okanye ube ngu-55.
Nangona akunakwenzeka, kunethuba elincinci kakhulu lokuba unokukhulelwa ngelixa uthabatha ipowder deogestrel.
♦ iingxaki zesibindi-ubuhlungu besisu, isifo, ukukhathazeka, ukuphelelwa kwesidlo, umchamo omnyama, izitshixo ezinobumba, i-jaundice (ukuphuzila kwesikhumba okanye amehlo);
♦ I-nasusea (ngokukodwa xa uqale uthabatha eli liyeza), ukuhlanza, ukucima;
Ucwaningo olungazange lufakwe ngokulandelelana lwalulandelayo lwabafazi be-200 banikezelwa i-desogestrel powder contraceptive 75 mcg nsuku zonke kwiinyanga ze-6 eziqala kwiiveki ze-6 emva kokugqithisa kwaye zifaniswe nabasetyhini be-200 abafumana indawo ye-placebos. Akukho mahluko afunyenwe kwimali yobisi okanye ukukhula kwabantwana kunye nophuhliso phakathi kwamaqela amabini.
Yinto Yonke Into Okufuneka Uyiqonde NgoBurtezomib Ingakanani i-4-DHEA ifumana i-Testosterone?